भारतमा भेटियो नयाँ कोरोना भेरियन्ट, कति खतरनाक ?
भारतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट भेटिएको छ । भारतको पुणेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीले आफ्नो एक अध्ययनमा कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि गरेको हो ।
मेडिकल क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रिप्रिन्ट रिपोर्ट्समा प्रकाशित एक वेबसाइटमा छापिएको रिपोेर्टमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । बायोआरएक्सआइभीमा छापिएको रिपोर्टमा यो भेरियन्ट बेलायत र ब्राजिलबाट भारतमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीमा भेटिएको जनाइएको छ ।
यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सन्जाल तथा भारतीय मिडियाहरुमा यसबारे निकै चिन्ता जनाइएको छ । भारतका केही रिपोर्ट्सहरुमा यो भेरियन्ट थप खतरानक भएको बताइएको छ ।
सामाजिक ससन्जालमा पनि यसलाई डेल्टा भेरियन्टसँग तुलना गरिएको छ ।
भारतकी एक चिकित्सक डा. प्रज्ञा यादवले यो पहिले नै ब्राजिलमा भेटिएको भेरियन्ट भएको बताएकी छिन् ।
कोरोनाका अन्य भेरियन्ट जस्तै यो भाइरसलाई पनि वैज्ञानिकहरुले निकै महत्वपूर्ण मानेका छन् । यसलाई डेल्टा भेरियन्ट जत्तिकै खतरनाक भएको बताइएकाले पनि यसले थप चिन्ता जन्माएको बिबिसी हिन्दीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : जेठ २६, २०७८ बुधबार ५:५३:५०, अन्तिम अपडेट : जेठ २६, २०७८ बुधबार १५:२७:५